Zavatra tsy mahazatra avy amin'ny sakafo mahazatra miaraka amin'ny sary
Sakafo tsy fahita firy
Poster 12.07.2018 24.07.2018 interesnenkoe, fomba fanamboarana
Manipy izany ao anaty fako izy, ary ireo chefie anglisy dia manampy amin'ny sakafo matsiro indrindra. Ary tsy noho ny maha-ara-toekarena azy ireo, fa isika kosa dia fandaniam-poana. Ary satria fantany ny fomba handraisany soa amin'ny zava-drehetra.
Ny ankamaroan'ny zavatra heverintsika ho fandanindanina dia mahasalama sy mahavariana mahazatra ireo chef tsara indrindra any UK. Nizara ny tsiambaratelony tamin'ny gazety Publié The Guardian izy ireo.
Avy amin'ny mofo mafana, afaka manao keky ianao, hanodinkodina azy ireo ary hampiasa azy ireo ho hanina. Izany no eritreretin'ireo Slavia.
Ao amin'ny andrefan'ny nanamafy fanaova tsy misalasala mahaliana kokoa ny mahandro sakafo. Ohatra, ny Tuscan mofo sy voatabia lasopy "Pappa Al Pomodoro" ary ny fahavaratra salady "panzanella", anisan'izany ny mofo, voatabia, lakolosy dipoavatra, tongolobe, menaka oliva, vinaingitra divay sy ny italianina anana.
Hatramin'ny andro talohan'ny omaly, ny mofo dia natao koa brushettes. Efa maina sotroina fa tsy matevina no mofomamy ao anaty menaka iray misy menaka oliva na maina ao anaty paosy. Ary ampiasao izany ho fototry ny sakafo.
Leaves and stalks of cauliflower
Efa zatra mampiasa môtô sy karazana ravina isika, saingy mbola tsy nianatra nanao toy izany tamin'ny alokaloka. Saingy ihany koa ny zavamaniry samihafa, ary ny sisa, indrindra fa ny loko.
Ny raviny ny soflera manome tsirony manokana ny salady, any ivelany izy ireo dia nahafeno anisan'ny ho an'ny pies, ary nendasina tamin'ny menaka miaraka amin'ny zava-manitra, ary nanompo ho toy ny misaraka lovia no izy.
Ny tsangatsangan'ny kôlôpôly dia mavesatra amin'ny tsy fitoviana, raha mahandroina, ary mamy ny tsirony. Manamboatra pentina tsara tarehy izy io.
Matetika ny Slavy dia mamela taolam-paty ho an'ny zezika manankarena. Saingy ny Britanika dia tsy noho izao fotsiny. Ohatra, misy kovolahy akoho mitsoka miaraka amin'ny legioma mamy sy divay mena. Voalohany, raraka ny zava-drehetra, ary avy eo mena. Farany, ho an'ny dipoavatra, toy ny papango, sira, hanampiana ireo zava-manitra, dia miteraka aretin-tsaina.
Tena tsara ny jiro misy menaka, tsy sasantsasany mamoaka azy avy ao anaty voankazo masira isika, manampy amin'ny zava-pisotro sy salady, ary atsipy ilay hoditra. Ary zava-poana.
Azo ampiasaina ny zest: tapatapaka kely, mametraka ao anaty siny, mamafy sira ary miala sasatra mandritra ny andro vitsivitsy. Manana fanatanjahan-tena tena tsara, mamy, matevina ary mafaitra kokoa noho ny sira citres mba hanandrana sy handanjalanja. Ny britanika dia mametraka izany amin'ny pasta miaraka amin'ny feta sy oliva mba hanomezana siramamy manokana.
Ho antsika izany dia manadio sy manala baraka, fako tsy azo idirana. Ary ho an'ireo chef britanika - singa manan-danja amin'ny lovia.
Mino izy ireo fa ambanin'ny hoditry ny tanora legioma miangona lehibe indrindra habetsahan'ny vitaminina. Ary aza misalasala manao salady ny Asparagus Peel, Peel ny karaoty, radish tampon, betiravy, seleria, maitso ampahany poarô. Fenoy ny iva-matavy marikivy fanosotra, manampy ny persily, cilantro, Basile, tarragon mba hanandrana.
← Tena mahasoa ny kanelina ho an'ny lehilahy
Sakafo mitovitovy amin'ny holatra amin'ny italiana →